Soomaali u hanjbtay soomaali kale oo diinta masiixiga qaatay gaala noqotay | Gaaloos.com
Home » Layaab » Soomaali u hanjbtay soomaali kale oo diinta masiixiga qaatay gaala noqotay
Soomaali u hanjbtay soomaali kale oo diinta masiixiga qaatay gaala noqotay
Nin soomaali ah oo magaciisa ku sheegay Maxamed Diinoos kuna nool dalka Kenya, ayaa sheegay in ay hanjabaado u soo direen soomaali meela kala duwan joogta sababo la xirriira diinta masiixiga uu qaatay.
Ninkan oo u warameyey wargeys toddobaadle oo leeyihiin kooxaha cunsuriyiinta ee mayalka adag ayaa u sheegay ninkan la baxay Diinoos in soomaalida Yurub ay yihiin kuwa sida gaar ah ugu soo dirro hanjabaado iyo aflagaado. Ninkan ayaa sheegay in ay tusaale wanaagsan oo u daydo gabar lugu magacaabo Muna Walter oo lafteeda ah haweeney soomaali ah oo diinta masiixiga qaadatay kuna dhiira gelisa soomaali badan ineey qaatan.
Diinoos oo haatan ku dhuumaaleeysanaya meelo ka mid ah Kenya ayaa sheegay inuu u shaqeyn jiray shirkada cabitaanka soo saarta ee Coca Cola, balse markii la ogaaday diintiisa ka soo baxsaday Soomaaliya isaga iyo walaalkiis oo labadoodiba heystaan diinta masiixiga. Wuxuu sidoo kale sheegay in marar badan la garaacay sababo la xirriirta diinta uu ka baxay, balse uu ku adkeeysanayo heeysashada diintaas oo ku sheegay ineey tahay mid dulqaad leh marka loo fiiriyo diinta Islaamka. Waalidka dhalay ayuu sheegay ineeysan raali ka aheyn qaadashada diinta masiixiga kuna xireen xabsi ay maamulaan kooxo uu ugu yeeray waahibiyiinta.
Ma ahan Diinoos iyo walaalkiis soomaalida sanadihii ugu dambeeyey ee ka baxay diinta Islaamka, waxaa jira soomaali badan oo caalamka daafihiisa ku nool haba ugu badnaadaan dalka jaarka la ah Soomaaliya ee Kenya, halkaas oo ah meel looga faa’iideeysto daruufaha adag ee heeysta gunayo ama lacag yarna ay qaarkood ku dhaafsadeen diintooda. Dalkan Iswiidhan ayaa waqti aanf ogeyn waxaa ku kulmay soomaali heeysata diinta masiixiga kuwaas oo baraha bulshada ee facebook-ga soo dhigay fariimo ay soomaalida kale u dirayeen kuna muujinayeen sida ay ugu qanacsan yihiinta diinta ay qaateen.
Title: Soomaali u hanjbtay soomaali kale oo diinta masiixiga qaatay gaala noqotay